Meizu သတင်းများ - ပစ်လွှတ်ခြင်း၊ မိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်၊ အမြစ်နှင့်အခြားအရာများ - Androidsis | Androidsis (စာမျက်နှာ ၂)
Meizu ၏တရားဝင် Weibo အကောင့်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ဝေမှုတစ်ခုအရ Meizu 17 ကိုinပြီလတွင်စတင်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
Meizu 17 ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်၊
Meizu 16T ကိုအောင်မြင်ရန် Meizu သည်နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုဈေးကွက်ထဲဖြန့်ချိမည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မနက်ဖြန်တွင်တရုတ်၌ပြုလုပ်မည့်ပွဲတစ်ခုတွင်ကြေငြာမည်။
Meizu 16T သည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ၊
Meizu 16T ကိုဖြန့်ချိပြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့စတိုင်၌ကတင်ပြ; ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, စျေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုအသေးစိတ်ကိုသိ!
ဒီစျေးနှုန်းဟာ Meizu 16T ဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းစတိုးကမလွှင့်ခင်ကြိုတင်တင်ထားပါတယ်
လာမယ့်အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်ဟာ Meizu 23T ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။
Snapdragon 16 Plus မှတစ်ဆင့် Meizu 855T သည် AnTuTu တွင်ထူးဆန်းသောရမှတ်တစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်
Snapdragon 16 Plus မှကမကထပြုထားသော AnTuTu အခြေခံစံနှုန်းသည် Meizu 855T ကိုစမ်းသပ်နေရာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်သိထားသည့်အတိုင်းအောက်တိုဘာလကုန်တွင်ပြုလုပ်မည့် Meizu 16T ဈေးကွက်သို့ Meizu XNUMXT ရောက်ရှိမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu 16s Pro သည် Twilight Forest ဟုခေါ်သည့်အရောင်သစ်ကိုရရှိခဲ့သည်
Meizu 16s Pro သည် Twilight Forest ဟုခေါ်သည့်အရောင်သစ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစိမ်းရောင်အရိပ်အပေါ်ယူ။ ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Meizu 16s Pro - တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်အဆင့်မြင့်
တရားဝင်မိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအဆင့်မြင့်ဖုန်းအသစ် Meizu 16s Pro အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်တွင် Flyme 28 သည် Meizu 8S Pro နှင့်အတူတကွရောက်ရှိမည်
မကြာသေးမီကထွက်ပေါ်လာသောမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းအချို့ကြောင့် Meizu သည် Meizu 8S Pro နှင့်အတူ Flyme 16 ကိုလွှတ်မည်ကိုငါတို့သိ၏။
Meizu 16S Pro ကို Geekbench မှလွှဲပြောင်းယူလိုက်ပြီးအချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ်ထွက်လာသည်
Meizu 16S Pro သည် Qualcomm ၏ Snapdragon 855 Plus နှင့်အခြားအရာများဖြင့် Geekbench ပလက်ဖောင်းထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒီမှာစာရင်းထဲကစစ်ဆေးပါ။
Meizu 16s Pro တွင်တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်သည့်ရက်စွဲရှိသည်
Meizu 16s Pro တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခုကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာပဲ၊
၎င်းသည် Snapdragon 16 Plus နှင့်အတူနောက်ထပ်ထင်ရှားသော Meizu 855s Pro ၏လှပမှုဖြစ်သည်
မကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုလက်ခံရရှိပြီး၎င်းသည် Meizu 16s Pro ဖြစ်သည်။
Meizu 16s Pro တည်ရှိမှုနှင့် ၂၄ ဝပ်ဝပ်မြန်သောအားသွင်းမှုတည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
တရုတ်စည်းမျဉ်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် 3C သည် Meizu 16s Pro ကို ၂၄ ဝပ်အမြန်အားသွင်းခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။
Meizu သည်၎င်း၏ Flyme 8 စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏လွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Meizu သည်၎င်း၏ Flyme 8 စိတ်ကြိုက်အလွှာအသစ်ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။
Meizu သည် ၀ န်ထမ်းများကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်ပြီး၊
Meizu သည်အခြားစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်မည်သူမဆိုထင်မြင်ယူဆသကဲ့သို့ထင်သလောက်မကောင်းဟုထင်ရသည်။
၂၀၂၀ တွင် Meizu မှ၎င်း၏ပထမဆုံး 5G ဖုန်းများကိုထုတ်လုပ်မည်
အတည်ပြုထားတဲ့အတိုင်းလာမယ့်နှစ်မှာသူ့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး 5G ဖုန်းများတရားဝင်မိတ်ဆက်ရန် Meizu ရဲ့အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား Meidu ဖုန်းများသည် Flyme OS 7.3 နှင့်သတင်းကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
Meizu က၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအနက်၎င်း၏စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောအလွှာ၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော Flyme OS 7.3 ကိုလက်ခံရရှိမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
Meizu 16Xs ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်
တရားဝင် Mezu 16Xs၊ တရုတ်ပြည်မှာတရားဝင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်အပြည့်အစုံနှင့် Meizu 16X ၏ဒီဇိုင်း
Meizu 16Xs သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်အလက်များစွာဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကြောင့်အလယ်အလတ်တန်းစားမျိုးဖြစ်မည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Meizu 16Xs ကင်မရာနမူနာများသည်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှန်ဘီလူး၏စွမ်းရည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်
Meizu 16Xs ဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပေါ်လာသည် - တစ်ခုမှာအဓိကအာရုံခံကိရိယာနှင့်ရိုက်ကူးပြီးနောက်တစ်ခုမှာအကျယ် - မှန်ဘီလူးဖြင့်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကသူ၏ Meizu 16S ယူနစ်သည်ဘုတ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာတွင်ကော်မရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Meizu 16s သည်လက်တွေ့ဘ ၀ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြောပြပါမည်
Meizu 16s သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပရီမီယံဖုန်းအသစ်၏ဒီဇိုင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ကင်မရာတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပြောပြပါမည်။
Meizu သည်၎င်း၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကို pop-up ကင်မရာဖြင့်ပြင်ဆင်သည်
Meizu သည်ရှေ့ဘက်ကင်မရာဒီဇိုင်းဖြင့်စမတ်ဖုန်းကိုစတင်ရန်စဉ်းစားနေသည်။ ၎င်းကိုသက်သေပြရန်မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုပေါ်လာသည်။
Meizu 16S သည် OIS နှင့်အခြား ၄၈ MP ပါသည့်အာရုံခံကိရိယာကိုပြသမည်
Meizu သည် Meizu 16S ၏အွန်လိုင်းပိုစတာကိုဝေမျှခဲ့ပြီးစမတ်ဖုန်း၏ကင်မရာဆက်တင်များနှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြသည်။
Meizu 16S ကိုလာမည့်Aprilပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Meizu Jingdong Mall ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမကြာသေးမီကမွမ်းမံခဲ့သည်၊ Meizu 16S စတင်ချိန်ကိုAprilပြီလ ၂၃ ရက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Meizu 16S သည် HIFI decoding amplifier ကိုအသုံးပြုပြီး 3.5mm jack ကိုစွန့်ပစ်လိမ့်မည်
Meizu သည်၎င်း၏နောက်ထပ် flagship ကိုစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီး၎င်းသည် Meizu 16S မှလွဲ၍ အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခုမှာ 3.5mm audio jack မရှိဘူး။
Meizu 16S: ၄၈ MP ကင်မရာနှင့် SD48 တို့ဖြင့်ရရှိမည့်မျက်နှာပြင်အားလုံးဖြစ်သည်
Meizu အမှုဆောင်သည် Meizu 16S high-end ဒီဇိုင်းကိုအဖြူရောင်အရောင်ဖြင့်တရားဝင်ပြန်ဆိုထားသည်။
Meizu 16S သည် Geekbench မှတဆင့်လမ်းလျှောက်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သိုလှောင်ထားသောအရာများအကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်
Meizu 16s သည်ပြီးခဲ့သည့်လကပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ရိုက်ရုပ်ပုံများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပူပြင်းသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Meizu အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကပြောကြားရာတွင် Meizu Zero သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်
ဤအမှုတွင်ကုမ္ပဏီ၏စီအီးအိုမှထုတ်ပြန်ခဲ့သောဆင်ခြေဆင်လက်များနှင့် Meizu Zero ပစ်လွှတ်မှုကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu Note 9: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
မကြာမီတွင်တရုတ်ပြည်တွင်ဖြန့်ချိတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ် Meizu Note9၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ။
Meizu Note9Lite သည် AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသွားပြီး၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Meizu Note9Lite လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ပေါက်ကြားဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်လာပါတယ်။ ယိုစိမ့်မှုသည်စမတ်ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဒီပုံရိပ်တွေက Meizu M16S Plus ၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုသည်
ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ကုန်၏ပုံရိပ်များပေါက်ကြားခဲ့ပြီး Meizu M16S Plus ၏ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုသည်။ ၎င်း၏အနည်းငယ်သောဘောင်များနှင့်မျက်နှာပြင်ကြီးမားသည်။
Snapdragon9နှင့် 175 GB RAM တို့ကြောင့် Meizu Note 675 သည် AnTuTu တွင် ၁၇၅ ကီလိုဂရမ်ကျော်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။
AnTuTu benchmarking platform တွင်လာမည့် Meizu Note9အလယ်အလတ်တန်းစားသည်ရမှတ် ၁၇၅,၉၈၇ ရှိသည်။
Meizu Note9ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည် [တရားဝင်ပိုစတာ]
Meizu Note9သည်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများကျင်းပသည့်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်ပိုစတာအသစ်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Meizu Note9- တရုတ်အိမ်၏နောက်ပရီမီယံ terminal နှင့် ပတ်သတ်၍ အရာအားလုံး
Meizu Note9ကိုလွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က M923Q 'မော်ဒယ်နံပါတ်အောက်တွင် TENAA တွင်တိကျသောသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Meizu Zero - အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်သည် port များနှင့်ခလုတ်များမပါဘဲ
ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ခလုတ်များမပါဘဲရောက်ရှိလာပြီးမကြာမီစျေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှ Meizu Zero ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အတည်ပြုလိုက်သည် - Meizu Note9သည် Snapdragon 6150 နှင့် 48 MP ကင်မရာဖြင့်ရောက်ရှိမည်
Meizu Note9သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှလာမည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ Snapdragon 6150 နှင့် 48 MP အဓိကကင်မရာတို့ပါ ၀ င်သည်။
Meizu သည် Flyme OS 7.2 beta ကိုစတင်ခဲ့သည်
Flyme OS 7.2 အား Meizu မှတရားဝင် beta ပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတချို့စက်တွေမှာအဲဒီစက်တွေရှိနိုင်တယ်။
Flyme7အတွေ့အကြုံသည်တရားဝင် Meizu 16 နှင့် 16 Plus ကိုတရားဝင်ရောက်ရှိသည်
Meizu သည် Flyme7Experience ကို Meizu 16 နှင့် 16 Plus အားတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီအငူအသစ်ဟာနောက် Flyme ရဲ့ဖြတ်တောက်ထားသော version ဖြစ်သည်။
Meizu 16X သည် AnTuTu ကို ဖြတ်၍ ၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြသည်
Meizu 16X သည် AnTuTu ကိုဖြတ်သန်း။ အဓိကအရည်အသွေးများကိုဖော်ပြသည်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီအတွက်စတိုးဆိုင်၌အဘယ်သို့ဆိုင်ထွက်ရှာပါ။
Meizu 16 and 16 Plus - အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်သောအထင်ကရနေရာများ၏အသွင်အပြင်များနှင့်စျေးနှုန်းများ
Meizu သည် Meizu 16 နှင့် 16 Plus တို့ကိုယခုပင်ထုတ်ဝေလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းအသစ်များ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
Meizu 16 တွင်ကြိုတင်မှာကြားထားမှုတစ်သန်းရှိသည်
Meizu 16s ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကြိုတင်မှာယူမှု တစ်သန်းကျော်သွားပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်ခင် ဒီမော်ဒယ်တွေရဲ့ အောင်မြင်မှုအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ရှာဖွေပါ။
Meizu 16 ကိုအမြန်ဆုံးစတင်မည်ဟုကုမ္ပဏီ၏စီအီးအိုကပြောကြားသည်
Meizu ၏စီအီးအို Jack Wong သည် Meizu 16 ကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ရောက်ရှိမည်ဟုကုမ္ပဏီ၏ပရိသတ်များအတွက်အနည်းငယ်သောအရာများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အသစ်ဖြစ်သော Meizu 16 နှင့် 16 Pro ကို စစ်ထုတ်ခဲ့သည်။
Meizu 16 and 16 Pro: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းများပေါက်ကြားခဲ့သည်။ သြဂုတ်လတွင်ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Meizu M6T သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အားလုံး၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိ!
Meizu M6T သည်ဤနေရာတွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသစ်သောထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလာဟလများနှင့်မှန်းဆမှုများပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာပြီးနောက်တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုတရားမ ၀ င်သောပုံစံဖြင့်တရား ၀ င်တင်မြှောက်ခဲ့သော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအဆိုပြုချက်များဖြစ်သည်။ ။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Meizu M8c: မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်စတင်အဆင့်လောင်းကစားခြင်း
Meizu M8c: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း ရုရှားတွင်တရားဝင်တင်သွင်းသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Meizu M6T သည် Geekbench တွင် Spreadtrum SoC ဖြင့်ပေါ်လာသည်
Meizu M6T သည်မကြာသေးမီက AnTuTu နှင့်အတူကျော်ကြားသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော Geekbench database တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီ terminal ကို Spreadtrum ကုမ္ပဏီပိုင်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုကထောက်ပံ့ပေးတာပါ။ SC9850 အကြောင်းပြောနေတာပါ။
Meizu မှ Android Go ဖုန်းတစ်လုံးကိုထုတ်လုပ်မည်
Meizu သည်ယခုနှစ် Android Go ဖုန်းကိုစတင်ရောင်းချမည်။ ဒီနှစ်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စတင်မိတ်ဆက်တော့မယ့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းတွေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အသစ် Meizu သုံးဒီမှာ! မင်းတို့ကို Meizu 15, 15 Plus နှင့် M15 နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်
မနေ့က Meizu သည်၎င်း၏ဖုန်းသုံးခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Meizu 15 Plus, Meizu 15 Plus နှင့် M15 အကြောင်းပြောနေတာပါ။ Meizu 15 Lite ဟုလည်းခေါ်သည်။ ပထမနှစ်ခုသည်အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအားလုံးကိုသိရှိထားပါ။
POP ကြိုးမဲ့နှင့် Halo လေဆာနားကြပ်များ - Meizu ၏နားကြပ်အသစ်
POP ကြိုးမဲ့နှင့် Halo လေဆာနားကြပ် - ယခုတနင်္ဂနွေနေ့တွင်တရားဝင်တင်ဆက်သည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှနားကြပ်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu 15, 15 Plus နှင့် M15 တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်သည်
Meizu 15 ကိုတင်ဆက်ပြီးတစ်ရက်မတိုင်မှီတွင်၊ ဤစက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုအခြားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သော Meizu 15 Plus၊ Samsung Exynos 8895 ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာနှင့်အဆင့်မြင့်သောအရာများ၊ Meizu M15 သည်အလယ်အလတ်တန်းစား SD625 SoC တပ်ဆင်ထားသည်။
Meizu 15 ကိုAprilပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်
Meizu 15 ကိုAprilပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ brandပြီလကုန်မှာပြသမည့်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောက်ရှိမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu သည်မျက်နှာပြင်အားလုံးဖုန်းများအတွက် fingerprint sensor အသစ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်
Meizu သည်လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုစနစ်အသစ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုသည်။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လက်ဗွေကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နည်းလမ်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏မူပိုင်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းအသစ်ဖြစ်သော Meizu E3 ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါသည်
တွေ့ဆုံရန် Meizu E3 - လက်ကိုင်ဖုန်းများပါ ၀ င်သည့်အလတ်စားတောင်းဆိုမှုများအတွက်ကဏ္featuresများပါ ၀ င်သောလက်ကိုင်ဖုန်း ၆ လက်မဖန်သားပြင်၊ အားကောင်းသော ၈-core SoC နှင့်ရက်ရက်ရောရော RAM မှတ်ဉာဏ်များသည်အများစုမှာစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Meizu E3 တင်ပြသည့်ရက်စွဲကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
Meizu E3: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်တင်ပြသည့်ရက်စွဲ။ ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Meizu သည် Meizu M6S ကို TENAA တွင်4နှင့် 6GB RAM memory ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဤအရာသည်မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီထုတ်လုပ်သူများ၏ကတ်တလောက်တွင်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သော်လည်း 6G RAM ပါသည့် M3S ၏ထူးခြားချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Meizu E3 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်သိနှင့်ပြီလား။ TENAA ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုဖော်ပြသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Meizu E3 သည်ဤကိရိယာ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့် TENAA၊ မင်းကိုပြတယ်!
Meizu X2 ကို ၂၀၁၈ အကုန်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်
Meizu ၏ VP က Meizu X2 ကိုရောက်ရှိလာခြင်းအပြင်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဒီပစ္စည်း၏စျေးနှုန်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Meizu 15 Plus ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
Meizu 15 Plus ၏ပထမဆုံးပုံများကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤပြန်ဆိုချက်များဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
၁၅ နှစ်မြောက် Meizu ကိုဂုဏ်ပြုမည့်ဖုန်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါက်ကြားခြင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး Meizu 15 ၏ကောလာဟလများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိနိုင်သည်။
Meizu M6s: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ပစ်လွှတ်မှုကိုအတည်ပြုသည်။ တရုတ်တံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Meizu mBlu S6 (M6S) သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်း။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်
Meizu mBlu S6 ကို TENAA တွင်တွေ့နိုင်ပြီး Xiaomi Redmi5နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုပြောပြပါမည်။
Meizu M6 Note သည်နောက်ကင်မရာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီး 4GB RAM အထိတပ်ဆင်ထားပြီး Flyme OS အလွှာဖြင့် Android 7.0 လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
ဒါက Meizu Pro 7, မျက်နှာပြင်နှစ်ဆရှိသည့်အတွက်အသုံးပြုသူအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်နိုင်ချေများကိုဖွင့်ပေးသောဖုန်းဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိနောက်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်လိုသလား။ Meizo Pro7အသစ်သည်ဤနည်းပညာကိုခေါင်းညိမ့်ပေးသည်။
နောက် Meizu Pro7နှင့် Pro7Plus သည်ဤအံ့အားသင့်မှုနှင့်အတူလာလိမ့်မည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Meizu သည်ဒုတိယ LCD မျက်နှာပြင်ကို Meizu7Pro နှင့်7Pro Plus terminal များ၏ကျောဘက်တွင်ထည့်သွင်းရန်စီစဉ်နေသည်
ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meizu M5 ၏စပိန်ဘာသာဖြင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၅၀ ထက်မကျော်သောနိမ့်ကျသောဖုန်းဖြစ်သည်။
Meizu M5c သည်အစွမ်းထက်။ အရောင်အသွေးစုံလင်သော mid-range စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Meizu သည် Meizu M5c ဟုခေါ်သည့်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
Meizu ၏ Super mCharge မြန်ဆန်သည့်အားသွင်းနည်းပညာသည် ၁၈ မိနစ်အတွင်းကုန်သွားသောမိုဘိုင်းဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
Meizu M5s ကိုလာမည့်သီတင်းပတ်တွင်မိတ်ဆက်မည်
Meizu M5s ကိုဒီတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဖုန်းများအဖြစ်နောက်အပတ်တွင်တင်ဆက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Meizu M3 မှတ်စု၊ သုံးသပ်မှုနှင့်ထင်မြင်ချက်
Meizu M3 Note ကိုထုတ်လုပ်သူမှထုတ်လုပ်လိုက်သော phablet အသစ်၏အရည်အသွေး၊ မျက်နှာပြင်နှင့်ချိန်ညှိထားသောစျေးနှုန်းကိုဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
Meizu M5 Note သည် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 5,5GB RAM နှင့် ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီတို့ဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်။
Meizu M5 Note သည် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 5,5GB RAM နှင့် ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်းချိုသာပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကွေးကောက်ကောက်သည်အသစ်နှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Meizu ဖုန်း၏ယိုစိမ့်မှုတွင်နောက်တဖန်တွေ့မြင်ရသည်။ ဒါဟာသင်ကွေးရှာတွေ့နိုင်ရှိရာအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
Meizu M3X ကို ၅.၅ လက်မနှင့် ၁၀၈၀p မျက်နှာပြင်၊ Helio P5,5 နှင့် 1080 GB RAM တို့ဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Meizu M3X သည်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal ဖြစ်ပြီး ၅.၅ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင်၊ Helio P5,5 ချစ်ပ်နှင့် RAM 20 / 3GB တို့ကိုမူကွဲနှစ်မျိုးဖြင့်တင်ပြသည်။
Meizu PRO6Plus ကို ၅.၇ လက်မအရွယ် QHD မျက်နှာပြင်၊ Exynos 5,7 နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာတို့ဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်
Meizu PRO6Plus သည် ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်၊ Exynos 5,7 ချစ်ပ်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာအပြင်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အနောက်ဘက်တွင်ကင်မရာနှစ်လုံးပါသည့် Meizu X ကိုပုံရိပ်အသစ်တစ်ခုပြသခဲ့သည်
terminal အသစ်၏ filtered ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Meizu X သည်နောက်ဘက်ရှိကင်မရာ dual configuration ကိုသွားသည်။
Meizu Pro 6S သည်ကင်မရာအသစ်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်
Pro6နဲ့ပတ်သက်ပြီး Meizu Pro 6s ဟာဖုန်းရဲ့အရေးအပါဆုံးဒြပ်စင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘက်ထရီနဲ့ကင်မရာကိုမွမ်းမံချက်တခုဖြစ်တယ်။
Meizu M5 သည် ၅.၂ လက်မမျက်နှာပြင်၊ polycarbonate body နှင့် 5,2GB RAM ကိုယူရို ၁၂၁ ဖြင့်ရောင်းချသည်
Meizu သည် M5 ကို ၅.၂ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 5,2GB RAM နှင့် polycarbonate body တို့ဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသည်။
AnTuTu မှတစ်ဆင့်လာမည့်တနင်္လာနေ့တွင်တင်ပြမည့် Meizu Pro 6S ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိထားပါသည်
ဒီတစ်ခါ AnTuTu မှာအသစ်ပေါက်ကြားမှုတွေကလာမယ့်အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ ကိုလာမယ့် Meizu Pro 6S ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသသည်။
Meizu Pro 6s ကိုအောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် deca-core ချစ်ပ်ဖြင့်ကြေညာမည်
Meizu Pro 6s သည်အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော်လည်း Meizu M31 ကဲ့သို့အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
Meizu Pro6သည်အာရှထုတ်လုပ်သူ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း
Meizu Pro6သည်တကယ့်ကိုပြည့်စုံသောဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပရီမီယံအချောနှင့်အဓိကကင်မရာ၏အရည်အသွေးနှင့်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။
၆ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် ၄,၁၀၀ mAh ဘက်ထရီပါဝင်သည့် Meizu M3 Max သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Meizu M3 Max သည် ၄ ​​င်း၏တိုင်းပြည်တွင်တင်သွင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၂၄၅ ဒေါ်လာဖြင့်ပြောင်းလဲမည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ terminal အသစ်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi Max နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့် Meizu M3 Max ၏စတိတ်ရုပ်ပုံများ
Meizu M3 Max သည်ယခုတရုတ်စစ်ထုတ်စက်၏ phablet ဖြစ်ပြီးယခုတွင်စစ်ထုတ်ထားသောစစ်မှန်သည့်ရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Meizu သည် U10 နှင့် U20 ကိုလက်ဗွေဆင်ဆာဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်
Meizu သည်ယနေ့တွင် U10 နှင့် U20 ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအသစ်ရောက်ရှိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ $ 4-150 ထက်မပိုသော 200G ကွန်ယက်များအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသောစမတ်ဖုန်းနှစ်လုံး။
Meizu PRO7သည်ကွေးသောမျက်နှာပြင်နှင့်ကင်မရာနှစ်လုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုစစ်ထုတ်သည်
Meizu PRO7၏နောက်ဖက်ရှိကင်မရာနှစ်လုံးသည်ဤဖုန်း၏ယိုစိမ့်နေသောပုံရိပ်နှစ်ခုတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Meizu M3E သည်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသောအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သည်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူက Meizu M3E၊ စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားပစ္စည်းကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။
Meizu MX6 သည်တစ်နေ့တည်းတွင်စံချိန် ၃.၂ သန်းရရှိခဲ့သည်
Meizu MX6 သည်ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်တွင်ကြိုတင်မှာကြားရန်အတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်ဖုန်းဖြစ်သည်။
Meizu မှ ၅ မီလီမီတာ HD မျက်နှာပြင်၊ 3GB RAM နှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုဒေါ်လာ ၁၀၆ ဖြင့်ရောင်းချမည်
Meizu m3s သည်တရုတ်ကုမ္ပဏီ၏စမတ်ဖုန်းသစ်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သော ၂ လကကြေညာခဲ့သောနောက်ဆုံးပေါ် m3 ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Meizu MX6 တွင်အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ် Helio X20 ချစ်ပ်နှင့်မူကွဲနှစ်ခုရှိပါလိမ့်မည်
အခြားဖုန်းများနည်းတူ Meizu MX6 သည် RAM နှင့် internal storage တွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲနှစ်ခုဖြင့်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ပထမဆုံး Meizu Mx6 ၏ပုံရိပ်များဖြန့်ချိပြီးနေ့စွဲ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပထမဆုံး Meizu Mx6 ပုံရိပ်များ၊ ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတရားဝင်စတင်သည့်နေ့ရက်များရှိသည်။
Meizu M3 သည်ဒေါ်လာ ၉၀ တန်ဖိုးရှိ octa-core chip နှင့် 13MP ကင်မရာဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Meizu မှအဆင့်နိမ့်နိမ့်ဖုန်း M3 ပါ ၀ င်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ 13MP ကင်မရာနှင့် octa-core ချစ်ပ်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
Meizu M3 Note ကိုတရားဝင်တင်ထားသည်
Meizu M3 Note ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းမပြောင်းလဲဘဲ hardware နှင့် design အသစ်များအသစ်
Meizu MX5e ကို 5,5″ 1080p AMOLED မျက်နှာပြင်၊ သတ္တုကိုယ်ထည်နှင့် 16MP ကင်မရာတို့ဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်
Meizu MX5e ကို ၅.၅ လက်မ Super AMOLED မျက်နှာပြင်၊ 5,5GB RAM၊ 3MP နောက်ကင်မရာ
Meizu Pro6၏ဓာတ်ပုံအတွဲအသစ်ပေါက်ကြား
Meizu Pro6တွင် RAM6GB ရှိပြီးဖုန်း၏ကျောဘက်နှင့်ရှေ့ဘက်တွင်တပ်ထားသောဓာတ်ပုံအသစ်နှစ်လုံးကိုယခုစစ်ထုတ်ပြီးပြီ။
Meizu M3 Note သည် AnTuTu တွင် Helio P10 ချစ်ပ်ပါရှိသည်
Aprilပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံး၌ AnTuTu benchmarking tool ကိုဖြတ်သန်းသွားသော Meizu M6 Note ကိုတင်ပြလိမ့်မည်။
'Dual Edge' panel ပါသော Meizu PRO6ကိုပြန်ပေးဆွဲသည်
Meizu PRO6သည်၎င်း၏ dual-edge panel ကိုထင်ရှားစေပြီး၎င်းသည် Galaxy S6 အစွန်းနှင့် Galaxy S7 အစွန်းတို့နှင့်အတူဒီဇိုင်းကိုတန်းတူထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Meizu သည်ရောင်းအားကို ၃၄၀% တိုး။ တိုးပွားလာခဲ့သည်
Meizu သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဘဏ္resultsာရေးရလဒ်အချို့ကိုတင်ပြခဲ့ပြီး Meizu ခံစားခဲ့ရသောရောင်းအားတိုးတက်မှုကိုပြသသည်
Meizu Pro5Mini သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်တွင်ရှင်းလင်းစွာ ဦး တည်ထားပြီးနည်းပညာအရအားကောင်းနေသည်။
Meizu M3 Note သည် metallic ဖြစ်လိမ့်မည်
လာမည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ Mid-range ၏ကြယ်ပွင့် terminal ဖြစ်သော Meizu M3 Note သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အချောသတ်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Meizu သည်တရားဝင် Meizu Pro5ကိုတရားဝင်တင်ခဲ့သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်ဒီနေ့၏အားသာချက်ကိုရယူပြီး၎င်း၏ terminal အသစ်ဖြစ်သော Meizu Pro5ကိုပြသခဲ့သည်။
ဒါက Meizu Pro5ပါ
တရားဝင်တင်ဆက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Meizu Pro5ကိုပုံများစွာတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Meizu Pro5သည် Geekbench ရှိ Galaxy Note5ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်
လာမည့် Meizu Pro5သည် Galaxy Note5ကိုစံသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်သာလွန်သည်။
Meizu MX5 Pro သည်၎င်း၏တင်ဆက်မှုမှဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်
Meizu MX5 Pro သည်တရုတ်ကုမ္မဏီ၏နောက်ထပ်အထင်ကရဖြစ်လာမည့်ယိုစိမ့်မှုအသစ်ကိုမတွေ့ရသေးပါ။
Meizu MX5 Pro သည် Exynos 7420 ပရိုဆက်ဆာကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်
ဇွန်လကုန်တွင် Meizu MX5 ဟုခေါ်သည့်အာရှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ဖြစ်သည်။ Meizu MX5 Pro ကိုမတင်ပြမှီအထိဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Meizu titan ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အသစ်တွေကိုနည်းနည်းချင်းစီထုတ်ဖော်ပြသထားတယ်။ နောက်ဆုံး? Meizu MX5 Pro သည် Exynos 7420 ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Meizu M2 သည်အမှန်တကယ်ရှိပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့သည်
Meizu M2 ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ Meizu ၏အလယ်အလတ်တန်းစား terminal အသစ်သည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ထူးခြားသည်။ Meizu M2 သည်ယူရို ၁၀၀ အောက်သာရှိသည်
ဟုတ်ကဲ့၊ Meizu နှင့် Nokia တို့ဟာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်တွင်လက်တွဲဖော်များဖြစ်လိမ့်မည်
Meizu M2 ၏တင်ဆက်မှုအတွက် Meizu သည်ဖိတ်ကြားချက်များစွာပေးခဲ့သည်။
Meizu သည် Nokia ၏မိတ်ဖက်သစ်ဖြစ်မလား။
Meizu သည် Nokia ၏မဟာမိတ်အသစ်ဖြစ်နိုင်သည်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်အပါအ ၀ င် ၁၄၅ ယူရိုနှင့်သာ Meizu M2 Note ကိုသင်ဝယ်နိုင်ပါသလား။ ထို့နောက်ဒီ post ကသင့်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။
Meizu MX5 ကိုတရားဝင်တင်ဆက်သည်
ဒီတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူမှ Meizu MX5 အသစ်ကိုလူသိရှင်ကြားတရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည်။
Meizu M2 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Meizu သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းများကြောင့်စိတ် ၀ င်စားမှုအများဆုံးသောတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခု Meizu M2 terminal အသစ်အသစ်ပေါက်ကြားပြီ
Meizu M2 Note သည်ကြိုတင်မှာကြားထားချက် ၁၀ သန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
Meizu M10 Note ၏ကြိုတင်သိုလှောင်ထားသောယူနစ် ၁၀ သန်းကိုရောက်ရှိပြီဟုကြေငြာလိုက်သည်
နောက်ထပ် Meizu MX5 ၏ပုံရိပ်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာ
တရုတ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့် Meizu MX5 ၏နောက်ထပ်အထင်ကရဖြစ်မှုကိုယိုစိမ့်မှုမရှိသေးသော်လည်းဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင်ပြသမည်။
Meizu M2 Note, 8 core နှင့်2Gb RAM သည်ယူရို ၁၅၀ အောက်သာရှိသည်
Meizu သည်ဆက်ခံမင်းသမီးအား Blue Charm ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Meizu M2 Note သည်အမှန်တကယ်ပင်ရှိပြီး ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် ၈-core ပရိုဆက်ဆာပါသည့် terminal ဖြစ်သည်
Meizu MX5 နှင့် MX5 Pro များ၏ရှေ့ပိုင်းတွင်စစ်ထုတ်ခဲ့သည်
လာမည့်ဇူလိုင်လတွင်တရုတ်ကုမ္မဏီ၏ကြယ်ပွင့်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သော Meizu MX5 နှင့် MX5 PRO ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။
Meizu MX5 ၏ Renders သည်ဘေးဘောင်မရှိဘဲမျက်နှာပြင်ကိုပြသည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ၂၀၁၄ တွင်အာရှထုတ်လုပ်သူ Meizu MX2014 နှင့် Meizu နှစ်မျိုးလုံး၏သုံးသပ်ချက်များကို ...
Meizu MX5 သည်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ဖြင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
လာမယ့် Meizu MX5 ၏ပုံရိပ်တွေကိုပေါက်ကြားစေပါတယ်။ လက်ဗွေဖတ်သည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှ terminal တစ်ခု။
Canonical နှင့် Meizu တို့သည်စွမ်းအားကောင်းသော Ubuntu ဖုန်းအသစ်ကို MWC 2015 တွင်တင်ပြမည်
လာမည့် MWC ၂၀၁၅ တွင် Meizu မှထုတ်လုပ်သော Ubuntu ဖုန်းအသစ်အားနည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် Meizu MX2015 ကိုခြေရာခံနိုင်ခဲ့သည်။
Meizu သည်စက္ကန့် ၆၀ အတွင်း ၁၀၀၀၀၀ Meizu M100.000 ကိုထပ်မံရောင်းချသည်
Meizu သည် Xiaomi ၏အရောင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်မိနစ်အတွင်း၎င်း၏ Meizu M100.000 ယူနစ် ၁၀၀,၀၀၀ ကိုရောင်းချခဲ့သည်။
Alibaba သည် Meizu တွင်ဒေါ်လာသန်း ၅၉၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
Meizu အတွက်အခြေအနေကောင်းနေပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သော Meizu MX4 နှင့် MX4 Pro …
Meizu သည် M1 Mini သစ်ကို€ for၉၉ အတွက် ၅″ ၇၂၀p၊ 5-bit မျက်နှာပြင်နှင့် 720MP ကင်မရာတို့ကိုပြသထားသည်
Meizu သည်အသစ်စက်စက် Meizu M1 Mini ကို 64-bit chip, 13MP ကင်မရာနှင့် 5MP front နှင့်အတူယူရို ၉၉ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
Meizu မှ M1 Note၊ ၅.၅ လက်မဖုန်း၊ 5.5GB RAM နှင့် 2-bit Mediatek octa-core ချစ်ပ်ကိုတင်ပြသည်။
ယူရို ၁၅၇ ၏နှုန်းကိုမရောက်ရှိသောစျေးနှုန်းအတွက် Meizu သည် M157 Note နှင့်စျေးကွက်ကိုချိုးဖျက်လိုသည်
သင်ယခု Meizu MX4 Pro ကို ၀ ယ်နိုင်သည်
ယခုတွင်သင်သည် Meizu MX4 Pro ကိုတရုတ်စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှဝယ်ယူနိုင်ပြီး၎င်းသည် ၄၁၁ ယူရိုဖြင့်အများဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းသင့်ကိုပို့ပေးသည်။
Blue Charm, Meizu ထုတ်ကုန်သစ်များကိုဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်တင်ပြမည်
Meizu သည် Blue Charm ထုတ်ကုန်သစ်ကိုဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်စမတ်ဖုန်းများမှသည် router များအထိပြသမည်ဖြစ်သည်။
Meizu K52 သည်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ယူရို ၁၀၀ နှင့်ရှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်
Meizu သည် ၁၀၅ ယူရိုကုန်ကျမည့် ၈ core ပရိုဆက်ဆာပါသည့်စမတ်ဖုန်း Meizu K52 တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမြင်လျှင်တစ် ဦး ကအစစ်အမှန် bargain
သုံးစွဲသူ ၆.၇ သန်းသည် Meizu MX6.7 Pro ကို ၀ ယ်ရန်စာရင်းသွင်းသည်
Meizu MX4 Pro သည်တရုတ်ပြည်တွင်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူ ၆.၇ သန်းသည်ယူနစ်တစ်ခုရရှိရန်စာရင်းသွင်းထားသည်။
Unboxing၊ Benchmarks နှင့် Meizu MX4 Pro နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံနမူနာများ
Meizu မှ Meizu MX4 Pro ကိုယမန်နေ့ကတင်ပြခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်သင့်အား၎င်း၏စံသတ်မှတ်ချက်များအပြင်ကင်မရာဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည့်ဥပမာများအပြင်စက်၏ unboxing ကိုသင်ယူဆောင်လာသည်။
Meizu MX4 Pro သည် Exynos 5430 chip၊ 3GB RAM နှင့် 20.7MP ကင်မရာတို့ဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Meizu MX4 Pro ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ ၅.၅ လက်မဖုန်း၊ octa-core chip နှင့် 5,5 megapixel ကင်မရာအားလုံးတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အပြီးသတ်ဖြစ်သည်
Meizu MX4 Pro ၏လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ၏ပုံတစ်ပုံကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Meizu MX4 Pro နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုသင်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာကိုပြသသောရုပ်ပုံများအသစ်ကိုသင်ယူလာပြီ
Meizu သည် Android 5.0 Lollipop ကို၎င်း၏ထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သည်
Meizu သည် Android 5.0 Lollipop ကို၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။ Meizu MX4 သည်နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုလက်ခံရရှိသည့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Meizu MX4 Pro အခြေခံစံနှုန်းများကိုစစ်ထုတ်သည်
လူသိများသော GFX ပေါ်တယ်သည် Meizu MX4 Pro အခြေခံစံနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
Meizu MX4 ကိုအောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင်ပြသနိုင်ပြီးယူရို ၂၅၀ အောက်သာကျသင့်မည်ဖြစ်သည်
အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင်တင်ပြနိုင်မည့် Meizu MX4 Pro အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အသစ်များအပြင်အချို့ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့ရသည်
Meizu MX4 ကိုဥရောပနှင့်စပိန်နိုင်ငံတို့တွင်လည်းရောင်းချမည်။
Meizu သည်၎င်း၏ Meizu MX4 စမတ်ဖုန်းကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်သာမကဥရောပနှင့်စပိန်နိုင်ငံတို့တွင်ပါအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Mi4 ကိုရင်ဆိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအာရှထုတ်လုပ်သူ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် Meizu MX4 ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
inWatch Pi « MX4 Edition » - စမတ်နာရီများ၌ယူရို ၅၀ ဖြင့်ကစားသည်
၎င်းသည်အသံထွက်ရန်ကြာမြင့်စွာစွန့်လွှတ်ခဲ့သော်လည်း inWatch Pi "MX4 Edition" သည် Meizu ၏စျေးနှုန်းမှာယူရို ၅၀ ဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစမတ်နာရီလောကတွင်ဖြစ်သည်။
Meizu MX4 သည် ၅၂၈၁၁ မှတ်သို့ရောက်သည်
Meizu MX4 သည် AnTuTu ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ၅၂၈၁၁ မှတ်ရရှိခဲ့သည်